I-11 iYunivesithi yaseToronto yasimahla kwaye ihlawulwe iikhosi ezikwi-Intanethi
Oktobha 10, 2020 Eze uThadayo
Nazi inani leyunivesithi yaseToronto iikhosi ezikwi-Intanethi kubandakanya zombini iikhosi zasimahla kwi-Intanethi kunye nezo zihlawulelweyo. IYunivesithi yaseToronto ibonelela ngezifundo ezininzi kwi-Intanethi kumaqonga ohlukeneyo okufunda kwi-Intanethi kunye nemicimbi yokufumana izatifikethi kubathathi-nxaxheba abaphumeleleyo kwezi zifundo.
ICanada yenye yezona ndawo zintle zokufunda emhlabeni, ayipheleli apho njengenye yeyona yunivesithi iphambili yaseCanada, iYunivesithi yaseToronto ibonelela ngezifundo ezikwi-Intanethi kuye nabani na onomdla kwimirhumo okanye simahla.
1 IYunivesithi yaseToronto Iikhosi ezikwi-Intanethi
1.1 Inyaniso ekhawulezileyo malunga neDyunivesithi yaseToronto
1.2 IYunivesithi yaseToronto iikhosi zasimahla kwi-Intanethi
1.2.1 FUNDA KWINKQUBO: IZISEKO
1.2.2 INTSHAYELELO KWI-PSYCHOLOGY
1.2.3 IZISEKO ZOPHUHLISO LWE-IOS
1.2.4 INTSHAYELELO YENKQUBO YOKUKHAWULEZA
1.2.5 UBUGCISA NESAYENSI YOBUDLELWANE: UKUQONDA IIMFUNO ZABANTU
1.2.6 INTSHAYELELO NGEENQWELO-MAFUTHA ZOKUZIHAMBA
1.2.7 INTSHAYELELO KU-GIS MAPHING
1.2.8 UQOQOSHO LOKUZIPHATHA
1.2.9 IINKCUKACHA-MANANI: UKWENZIWA KWENGCACISO YEDATA
1.2.10 FUNDA KWINKQUBO: INKQUBO YOKUQHUBA
1.2.11 Ukucwangciswa kweMotion kweemoto eziqhuba ngokwakho
1.3 IYunivesithi yaseToronto Iikhosi ezihlawulelweyo kwi-Intanethi
1.3.1 ISISEKO SEFICIYOSI YABANTU
1.3.2 IIREKHODI NOKWENZIWA KOLAWULO LOLWAZI
1.3.3 UKUPHUHLISA NOKUHAMBISA IINKQUBO ZOKUFUNDA
1.3.4 INTSHAYELELO NGOKUTHENGISA
1.3.5 UXANDUVA LOKUNIKA INGXELO KWEZEMALI
1.3.6 UMTHETHO WOSEBENZI
1.3.7 UKUTHETHA KOLUNTU NOKWENZA INGXELO
1.3.8 IZINTO EZIBALULEKILEYO ZOKULAWULA ABANTU
1.3.9 UKUBHALA OKUYILAYO
1.3.10 INTSHAYELELO NGOKUTSHINTSHA IINDLELA ZESIGMA ZESITHANDATHU
1.3.11 IZISEKO ZOLAWULO LWEPROJEKTHILE YANGAPHAMBILI
IYunivesithi yaseToronto Iikhosi ezikwi-Intanethi
Nangona kunjalo iYunivesithi yaseToronto ayiboneleli kuphela izifundo zekhompyutha, kukho iikhosi ezihlawulwa kwi-Intanethi ezibonelelwa liziko nakweli nqaku, uya kwazi ngezi zifundo zasimahla nezihlawulelweyo kwi-intanethi kwaye emva kokufunda uyakuba kukucofa kube kanye ukuqala iklasi yakho ye-Intanethi kunye neDyunivesithi yaseToronto.
Inyaniso ekhawulezileyo malunga neDyunivesithi yaseToronto
Isungulwe kwi-1827, iYunivesithi yaseToronto yenye yeeyunivesithi eziphambili zehlabathi ezaziwa ngokugqwesa ekufundiseni, ukuvelisa izinto ezintsha, uphando, ukurhweba kwaye inegalelo elibonakalayo kuhlumo loqoqosho nakwimpilo-ntle yoluntu kwihlabathi liphela.
Emva kophando olunzulu oluhlala lusenziwa ukuzisa okona kulungileyo kubafundi bethu, saqulunqa iikhosi ezili-11 zasimahla nezihlawulelweyo kwi-Intanethi kwiYunivesithi yaseToronto.
IYunivesithi yaseToronto ibekwe eCanada njengoko ibhaliwe ngaphambili kwaye iCanada yenye yezona ndawo zibalaseleyo emhlabeni onokufunda kuzo, onokufikelela kuzo funda iikhosi zasimahla eCanada kwi-intanethi
Inkqubo eqhubekayo yeYunivesithi yaseToronto inokugqitywa nokuba kukwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi. Ungajonga eyunivesithi umyinge wokwamkelwa apha.
Ngelixa kukho amathuba aliqela okufunda kwi-Intanethi eCanada, kukwakho nenani elininzi lamathuba angaphandle kweCanada. Kukho inani le Iikholeji ze-Intanethi ezingabizi kakhulu ngaphandle kwemali yokufaka isicelo
IYunivesithi yaseToronto iikhosi zasimahla kwi-Intanethi
Isiseko soPhuculo lweApple
Intshayelelo kwiNkqubo eSwift
Ubugcisa kunye neSayensi yoBudlelwane: Ukuqonda iimfuno zaBantu
Intshayelelo kwiimoto eziqhuba ngokwakho
Intshayelelo kwimephu ye-GIS
Uqoqosho lweNdlela yokuziphatha
Izibalo: Ukwenza Ingqondo yeDatha
Funda kwiNkqubo: Uyilo lweKhowudi yoMgangatho
Ukucwangciswa kweMotion kweemoto eziqhuba ngokwakho
FUNDA KWINKQUBO: IZISEKO
Kule khosi, uya kufunda ukuba ungakha njani iibhloko zenkqubo kwaye ukwazi ukubhala kunye neenkqubo eziluncedo usebenzisa ulwimi lwePython. Emva kokugqitywa ngempumelelo kwale khosi, uya kuba nesiseko senkqubo yekhompyuter kunye nezakhono zenkqubo yePython.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-29
Psychology kukufunda kwengqondo yomntu kunye nokuziphatha. Kule khosi, uya kufunda okuninzi malunga nomhlaba wengqondo kwaye ukwazi ukuchonga iintlobo ezahlukeneyo zokugula ngengqondo kunye nendlela yokunceda abantu abanengxaki kuyo.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-33
IZISEKO ZOPHUHLISO LWE-IOS
Le khosi iya kukufundisa indlela yokwenza isicelo se-iOS (i-Apple) ukususela ekuqaleni, iya kwandisa izakhono zakho zenkqubo onokuyisebenzisa ekuphuhliseni iiprojekthi ze-app eziyinyani usebenzisa izikhokelo kunye neeparameter ezichaziweyo.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-10
INTSHAYELELO YENKQUBO YOKUKHAWULEZA
Kule khosi, uya kufunda izakhono kunye nezixhobo eziyimfuneko ekwakheni iapps emhlabeni kwaye ukwazi ukubhala iiapps ze-iOS usebenzisa inkqubo ekhawulezayo.
UBUGCISA NESAYENSI YOBUDLELWANE: UKUQONDA IIMFUNO ZABANTU
Kule khosi, uya kufunda malunga neekhonsepthi ezisisiseko zezicwangciso kunye nenkqubo yokufunda yezakhono kunye nenkqubo yophuhliso kunye nokubaluleka kwayo kubudlelwane bemihla ngemihla kwaye unikeze iikhonsepthi eziphambili kubantu abasebenza kwicandelo lomsebenzi wentlalo kunye nokhathalelo lwempilo.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-28
INTSHAYELELO NGEENQWELO-MAFUTHA ZOKUZIHAMBA
Esi sisifundo sokuqala kwabafundi abaziqhubayo kwaye apha uya kufunda imigaqo eyimfuneko, uvavanyo lokhuseleko kunye nokuqwalaselwa koyilo lweemoto eziqhutywa nguwe. Emva kokugqitywa ngempumelelo kwale khosi yasimahla ekwi-Intanethi enikezelwa yiyunivesithi yaseToronto, uya kuba nakho ukuqonda kwaye wazi izixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziswayo kwiimoto eziqhuba ngokwakho kwaye ubonise izinto eziphambili zesoftware yokuqhuba ngokwakho.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-26
INTSHAYELELO KU-GIS MAPHING
Kule khosi, uya kufunda iziseko zeNkqubo yoLwazi lweJografi (GIS), iMephu kunye noHlahlelo lweNdawo, indlela yokusebenzisa isoftware, funda imephu ngokufanelekileyo kwaye urekhode ulungelelwaniso. Emva kokugqiba le khosi uyakuyiqonda i-GIS kunye neMephu kunye nendlela yokuyisebenzisa ukusombulula iingxaki kunye nokuvelisa iziphumo ezilungileyo.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-18
Le khosi enxulumene noqoqosho eya kuthi ikufundise indlela yokufunda ukhetho lwabathengi, imicimbi yentengiso kunye neengqondo zabantu ukuze bancede baqonde izigqibo zabo kwaye bazame ukwenza iimodeli zoqoqosho ezichanekileyo.
Emva kokugqitywa kwezifundo, uya kuba nakho ukusebenzisa imigaqo-nkqubo kunye neendlela zoqoqosho lokuziphatha ukutshintsha isimilo, ukuphucula intlalontle kunye nokwenza iimveliso ezingcono kunye nomgaqo-nkqubo.
Ixesha lesifundo: Iiveki ezi-6, iiyure ezi-4 ngeveki.
IINKCUKACHA-MANANI: UKWENZIWA KWENGCACISO YEDATA
Le yikhosi yokwazisa ekusebenziseni ukuqiqa ngeenkcukacha-manani eziya kubonisa abafundi iindlela zokuqokelela idatha, indlela yokuphuhlisa imiboniso esebenzayo kunye nenani lokuqonda idatha, ukubaxhobisa ngezakhono zobalo olusisiseko kunye nendlela yokwenza isicelo sale khosi kuphando ngokubanzi Uluhlu lwentsimi.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-22
FUNDA KWINKQUBO: INKQUBO YOKUQHUBA
Le khosi iya kukufundisa indlela yokubhala ikhowudi esemgangathweni esebenza ngokufanelekileyo kwaye ivelise iziphumo ezilungileyo kwaye uya kufunda indlela yokuyila, ikhowudi kunye nokugunyazisa iinkqubo.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-20
Le khosi iya kukufundisa ukuba ucwangcise njani imisebenzi ekuqhubeni ngokuzenzekelayo kubandakanya ingingqi, imishini kunye nocwangciso lokuziphatha. Emva kwale khosi, uya kuba nakho ukufumana eyona ndlela imfutshane kwigrafu okanye kwinethiwekhi yendlela usebenzisa ialgorithm ekhethekileyo.
Nangona kunjalo, zingaphezulu kwe-11 iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiDyunivesithi yaseToronto kodwa ezi zezona zikuluhlu oluphezulu eziye zahlanganiswa emva kophando lwam njengoko zikunika amathuba aphezulu okufumana umsebenzi ngokukhawuleza, ukuqala ikhondo lomsebenzi omtsha okanye ukunyuselwa iofisi yakho emva kokubonisa ezi zakhono.
bona i Iiyunivesithi eziphezulu ze-Intanethi e-Australia
Ngoku, kwisihloko esilandelayo oya kuthi ngokufanayo ufumane umdla.
Njengoko ndibhalileyo ngaphambili, kukho inani leyunivesithi yaseToronto iikhosi ezikwi-Intanethi kwaye ngelixa ezinye zisimahla, ezinye zihlawulwa ngokulinganayo.
Apha ngezantsi luluhlu lwezifundo ezixabisekileyo ezihlawulelweyo kwi-Intanethi ezibonelelwa yiyunivesithi yaseToronto kunye nexesha labo eliqikelelweyo lokugqitywa.
IYunivesithi yaseToronto Iikhosi ezihlawulelweyo kwi-Intanethi
Isiseko sePhysology yoLuntu
Ukurekhodwa kunye nokuziQhelanisa noLawulo loLwazi
Ukuphuhlisa kunye nokuHambisa iiNkqubo zokuFunda
UkuPhathwa kweeMali eziPhambili
Ukuthetha esidlangalaleni kunye neNtetho
Izinto ezibalulekileyo zokuLawula abantu
Intshayelelo kwiNdlela eziLamileyo zeSigma
Isiseko soLawulo lweProjekthi ye-Agile
ISISEKO SEFICIYOSI YABANTU
Le khosi ifundiswa kwi-Intanethi licandelo lezonyango, kwiDyunivesithi yaseToronto kwaye apha uya kufunda ngokusebenza komzimba womntu, ukuba usebenza njani kwaye kutheni umzimba womntu uphendula kwiimeko ngendlela esebenza ngayo. Uya kwazi nomzimba womntu ngokwenkqubo yomzimba, yikhosi yokufunda oya kuyifumana inomdla ngokwenene.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-54
IIREKHODI NOKWENZIWA KOLAWULO LOLWAZI
Le khosi yokufunda iya kukusa nzulu ekugcineni ulwazi, ukhuseleko, ulawulo kunye nemicimbi yabucala. Uya kufunda ngeendlela ezifanelekileyo kunye nobuchule bokugcina kunye nokuhlela ulwazi, ukwenza imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zokuvavanya umngcipheko. Emva kokugqitywa, unokukwazi ukumilisela kunye nokusebenzisa iirekhodi ezinamandla kunye neenkqubo zolawulo lolwazi kwimibutho emikhulu.
Ixesha lesifundo: iiyure ezingama-36
UKUPHUHLISA NOKUHAMBISA IINKQUBO ZOKUFUNDA
Kule khosi uya kufunda malunga notshintsho lwezixhobo zolawulo kunye nokusetyenziswa kwayo kwindawo eyimfuneko, le khosi iya kukunceda wenze izigqibo ezifanelekileyo kunye nezisebenzayo ezithi xa zisetyenziswa kwishishini lakho, umbutho, iqela okanye ikhondo lomsebenzi ziya kuvelisa iziphumo ezingcono.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-24
Lo ngumxholo osisiseko okanye oqalayo kwintengiso, uya kufunda ubuchule, iindlela kunye nobuchule ukusuka kumgangatho wentengiso yedijithali oxabisekileyo kumbutho ophumeleleyo. Emva kokugqitywa kwesi sifundo, uya kuba nakho ukusebenzisa inkqubo yentengiso kwiingxaki ezifanelekileyo nakwiimeko.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-39
UXANDUVA LOKUNIKA INGXELO KWEZEMALI
Ukuba sele unolwazi kubalo-mali olusisiseko ke le khosi yeyakho njengoko iya kukwenza ube yingcali ngakumbi emva kokuba ugqibile kuyo, iya kukuthatha ingenise kubalo-mali, ikubhence kwiindlela zakutshanje zezemali eziya kufaneleka imodeli yeshishini yanamhlanje.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-48
Le khosi iya kukufundisa imithetho malunga neshishini kunye nendlela yokusombulula imiba yezomthetho ngokubhekisele kumashishini. Emva kokugqitywa kolu phononongo, uya kuba nakho ukuthetha ngemicimbi yezomthetho kunye nesiphumo sayo, uchonge imiba yezomthetho evela mihla le kumashishini kwaye wazi amagama asemthethweni asetyenziswa kushishino lwemihla ngemihla.
UKUTHETHA KOLUNTU NOKWENZA INGXELO
Indlela othetha ngayo nabanye ibaluleke kakhulu, kule khosi uya kufunda izicwangciso eziphambili zonxibelelwano olusebenzayo. Uya kulungiswa ngokuzithemba kunye nomxholo ofanelekileyo oza kuwusebenzisa kubaphulaphuli bakho nokuba ungumthengi okanye umthengi.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-36
Ngaba unqwenela ukuba yinkokeli okanye umphathi? Ke le khosi yeyakho, uya kufunda izakhono, iindlela kunye neendlela zokulawula abantu kwaye ulawule ilungelo labo lokuvelisa isiphumo esifanelekileyo ngesizathu solawulo.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-15
Ngelinye ixesha ebomini bethu siye safunda okanye safumana imixholo ebhaliweyo esincedileyo, le khosi yokufunda izokunceda ukukhulisa ikhondo lakho lomsebenzi ngokubhala. Uya kufunda ukubhala imixholo efanelekileyo eya kuthi ikhangeleke iyathandeka kwaye yamkelekile kubaxhasi bakho, amaqabane oshishino kunye nabathengi.
INTSHAYELELO NGOKUTSHINTSHA IINDLELA ZESIGMA ZESITHANDATHU
Imibutho yaziwa ukuba ijike kwindlela yeLean Six Sigma (LSS) xa ifuna ukuzimisela malunga nokuphucula iinkqubo kunye nokwenza umgangatho ophezulu.
Kule yunivesithi yaseToronto ikhosi ekwi-Intanethi, uya kufunda izakhono ezisisiseko ezifunekayo ukwenza iiprojekthi ze-LSS, ufumane ukuqonda ngakumbi ukuba kutheni izinto zingahambi ngendlela kunye nendlela yokuyila uphuculo olunokulinganiswa xa zisenza.
IZISEKO ZOLAWULO LWEPROJEKTHILE YANGAPHAMBILI
Le khosi iya kunceda ukwakha ulwazi lwakho olusisiseko kuLawulo lweProjekthi ye-Agile. Uya kufunda indlela ye-agile yemveliso kunye nolawulo lweprojekthi, indlela yokulungelelanisa amaqela eeprojekthi enza izisombululo ezinobuchule kunye nokwazi ukucwangcisa nokuhambisa iiprojekthi ngempumelelo.
Olu luhlu lwezifundo eziphambili ze-11 ezihlawulwa kwi-Intanethi yiYunivesithi yaseToronto ukukhulisa ulwazi lwakho esele lukhona ngokwenza ukuba ube yingcali okanye ufunde into entsha ngokupheleleyo ukongeza kwezinye izakhono.
Ukuba ungumfundi okhutheleyo kwi-Intanethi, unokufumana i- Isidanga esikhawulezayo kwi-intanethi kwisithuba esingaphantsi kwesiqingatha sexesha eliqhelekileyo leminyaka eliya kuthatha ngaphandle kweintanethi.
Ezi yunivesithi yaseToronto zasimahla nezihlawulelweyo iikhosi ezikwi-Intanethi ayizizo zonke iikhosi ezinikezelwa yiyunivesithi kodwa zezona zikwinqanaba eliphezulu ezinokukufumanela umsebenzi ngokukhawuleza okanye zikunyuse emsebenzini. Nangona oku kuyingcinga yam yobuqu, ukuba intsimi ofuna ukuyithatha ayidweliswanga apha kwaye kubonakala ngathi awuyithandi nayiphi na kwezi zidwelisiweyo, zive ukhululekile ukulandela intliziyo yakho.
Zonke iikhosi ezikwi-Intanethi ezidwelisiweyo ziyinxalenye yezifundo zekhulu lama-21 leminyaka ezifunekayo kubasebenzi namhlanje, ke ukuzifunda kuya kukwenza ube phambili kukhuphiswano kwaye uthathe isifundo sakho ngokungathí sina njengoko iziphumo zoko ukufundileyo ziya kugqiba uya kude.
Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazwe
Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi
IYunivesithi yaseToronto yasimahla kwaye ihlawulwe iikhosi ezikwi-IntanethiIYunivesithi yaseToronto iikhosi zasimahla ezikwi-IntanethiIYunivesithi yaseToronto Iikhosi ezikwi-IntanethiIYunivesithi yaseToronto ihlawule iikhosi ezikwi-Intanethi
Post Previous:Izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha iiNdawo zokuHlala zaBafundi beKholeji
Okulandelayo Post:Ungawusinda njani unyaka wakho wokuqala uhlala kwelinye ilizwe | Chaza ulwazi lweCPA
Pingback: Izifundo ezingama-27 zasimahla zoKhuseleko kwi-Intanethi ezineZatifikethi-iiNkonzo zokuFunda kwi-Intanethi
Pingback: 23 Iimviwo zeSiqinisekiso seSimahla se-Intanethi kwi-2021
Violet NAKYEVUGA uthi:
Juni 26, 2021 kwi-9: 25
Ndifaka nini isicelo njengomfundi wamazwe aphesheya kwikhosi yezoQoqosho